Izindaba - Umehluko phakathi kweBall Valve neButterfly Valve
Umehluko omkhulu phakathi kwamaveluvane amvemvane namaphayiphu ebhola ukuthi ivalveve uvemvane ivulwa ngokuphelele noma ivaliwe ngokusebenzisa i-disc ngenkathi i-valve yebhola isebenzisa ibhola elingenalutho, elibunjiwe nelishukumisayo ukwenza lokho. Kokubili i-disc yeveluvane levemvane nomgogodla we-valve we-valve yebhola ujikeleza uzungeze i-eksisi yabo. Ivelufa levemvane lingalawula ukugeleza ngedigri yalo evulekile ngenkathi i-valve yebhola ingekho lula ukwenza lokhu.
I-butterfly valve ibonakala ngokuvula nokuvala okusheshayo, ukwakheka okulula nezindleko eziphansi, kepha ukuqina namandla ayo okuzithwala akukuhle. Izici zamavalvu ebhola ziyafana nezama-valve esango, kepha ngenxa yomkhawulo wevolumu nokuvulwa nokuvalwa kokumelana, kunzima ukuthi i-valve yebhola ibe wububanzi obukhulu.
Isakhiwo sendlela yamaveluvemvane siwenza afaneleke ngokukhethekile ukwenziwa abe ubukhulu obukhulu. I-disc ye-valve uvemvane ifakiwe kusiyingi sephayiphi. Endimeni eyindilinga yomzimba womvemvane wevemvane, idiski izungeza i-eksisi. Lapho ijikelezwa ngekota, i-valve ivuleke ngokuphelele. Ivemvane valve inesakhiwo esilula, izindleko eziphansi kanye nohlu olubanzi lokuguquguquka. Amaphayiphu ebhola ngokuvamile asetshenziselwa uketshezi namagesi ngaphandle kwezinhlayiya nokungcola. Lawa ma-valve anokulahleka kwengcindezi okuncane kuketshezi, ukusebenza kahle kokubeka uphawu nezindleko eziphezulu.
Uma kuqhathaniswa, ukubekwa uphawu kwe-valve yebhola kungcono kune-valve yovemvane. Uphawu lwevalvu yebhola kuncike ekucindezelweni ebusweni obuyindilinga ngesihlalo se-valve isikhathi eside, okuqinisekile ukuthi sigqoka ngokushesha kune-valve yebhola. I-valve yebhola ivame ukwenziwa ngento yokufaka uphawu eguquguqukayo, futhi kunzima ukuyisebenzisa ekushiseni okuphezulu nasemapayipini anomfutho ophakeme. Ivelufa levemvane linesihlalo senjoloba, okukude nokusebenza kwensimbi okuqinile kokufakwa uphawu kwamavalvu ebhola elincane, amavalvu ebhola kanye namavalvu esango. Ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside i-valve yebhola eyisiqingatha, isihlalo se-valve naso sizogqokwa kancane, futhi singasetshenziswa ngokuqhubekayo ngokulungiswa. Lapho isiqu nokupakisha kuvulwa futhi kuvaliwe, isiqu sidinga kuphela ukuzungezisa ukujika kwekota. Lapho kukhona noma yisiphi isibonakaliso sokuvuza, cindezela ibhawodi lendlala yokupakisha ukuze ubone ukuthi akukho ukuvuza. Kodwa-ke, amanye ama-valve asasetshenziswa ngokulambisa ngokuvuza okuncane, futhi ama-valve afakwa esikhundleni sokuvuza okukhulu.
Ngenqubo yokuvula nokuvala, i-valve yebhola isebenza ngaphansi kwamandla okubamba izihlalo ze-valve kuzo zombili izinhlangothi. Uma kuqhathaniswa ne-semi-ball valve, i-valve yebhola ine-torque enkulu yokuvula nokuvala. Futhi ubukhulu be-nominal bubukhudlwana, umehluko okhanyayo wokuvula nokuvala i-torque. Ukuvulwa nokuvalwa kwesivalo sevemvane kutholakala ngokunqoba ukusonteka kwenjoloba. Kodwa-ke, kuthatha isikhathi eside ukusebenzisa ama-valve esango nama-globe valve futhi kuyasebenza futhi ukukwenza lokho.
I-valve yebhola ne-plug valve zinhlobo olufanayo. yi-valve yebhola kuphela enebhola elingenalutho ukulawula ukuhamba ngayo. Amaphayiphu ebhola asetshenziselwa ukusika, ukusabalalisa nokuguqula ukugeleza kokuhamba kwamapayipi.